यस्ता छन्, आईपीएल–२०१७ का टिम - खेलकुद - साप्ताहिक
यस्ता छन्, आईपीएल–२०१७ का टिम
जस्तै विवादले घेरिए पनि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) ले विश्व क्रिकेटमा ल्याएको परिवर्तन कसैबाट लुकेको छैन । भारतीय क्रिकेटको यो घरेलु ट्वान्टी–२० प्रतियोगिता विश्वकै सर्वाधिक धनी प्रतियोगिता हो । खेलाडीले अविश्वसनीय रूपमा कमाउने हुनाले नै यसले विश्वका सबैभन्दा राम्रा प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्छ । यसलाई भारतमा मात्र पछ्याइँदैन, क्रिकेट मन पराउने पूरा विश्वले यो प्रतियोगिता रुचाउँछ । संयोगले यो प्रतियोगिताले यसपल्टको संस्करणसँगै एक दशक पूरा गरेको छ । यसपल्टको आईपीएल–२०१७ यसको दसौं संस्करण हो । गत साता प्रारम्भ भएको आईपीएलमा सहभागी आठ टिम कस्ता छन् त ?
पछिल्लो संस्करणको विजेता हो— सनराइज हैदराबाद । अस्ट्ेरलियाली आक्रामक प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान डेविड वार्नरको नेतृत्वमा हैदरावादले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै उपाधि जितेको थियो । यसपल्ट हैदराबादले उपाधिको रक्षा गर्न सक्ला त ? यसको उत्तर वार्नरसँगै उनका अर्का प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान जोडी शिखर धवनमा निर्भर हुनेछ । धवन पनि भारतीय क्रिकेटका सर्वाधिक आक्रामक ब्याट्सम्यान हुन् । टिमको मध्यक्रमको ब्याटिङ भने कमजोर छ । त्यसलाई भरथेग गर्ने काम युवराव सिंहको काँधमा हुनेछ । टिमको बलियो पक्ष बलिङ हो । हैदरावाद नै त्यो टिम हो, जसले दुई अफगान खेलाडी मोहम्मद नाबी र रसिद खानलाई आफ्नो टिममा लिएको छ ।
दिल्ली डेयरडेभल्सको टिम कति सन्तुलित छ, त्यो प्रतियोगिताकै क्रममा देखिनेछ । यसको कारण हो— दुई प्रमुख दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी क्विन्टन डे कक र जेपी डुमेनी अहिलेको टिममा छैनन् । त्यसैले टिमको माथिल्लो क्रमको ब्याटिङ कमजोर छ र यो पूर्णत: भारतका युवा खेलाडीमा निर्भर छ । तीमध्ये अधिकांश खेलाडी भारतीय टिममा स्थान बनाउन संघर्षरत छन् । टिमको बलियो पक्ष बलिङ हुन सक्छ र बलिङ आक्रमणको जिम्मा हुनेछ— मोहम्मद सामी र अमित मिश्रमा । टिममा तीन राम्रा विदेशी बलर पनि छन्, क्रिस मोरिस, प्याट कमिन्स र कगिसो रबाडा । बलिङले नै यो टिमलाई माथि पुर्‍याउन सक्छ ।
भारतीय टिमका स्टार खेलाडी हुन्— रवीन्द्र जडेजा । उनको प्रदर्शनमा धेरै हदसम्म गुजरात लायन्सको यात्रा पनि निर्भर हुनेछ, तर जडेजा चोटग्रस्त छन् र उनले केही सुरुवाती खेल खेल्नेछैनन् । जडेजालाई छाडेर टिममा राम्रा स्पिनरको कमी छ, तर टिमको ब्याटिङ क्रम भने गज्जब छ, विशेषत: मध्यक्रमको । यस क्रममा आउने खेलाडी हुन्— ब्रेन्डन म्याकलम, एरोन फिन्स, ड्वायन स्मिथ र जेसन रोयसँगै दुई भारतीय खेलाडी सुरेश रैना र दिनेश कार्तिक । टिमसँग ड्वायन ब्राभो र जेम्स फल्कनजस्ता दुई आक्रामक अलराउन्डरसमेत छन्, जसले कुनै पनि समय खेलको समीकरण फेर्न सक्छन् ।
किङ्ग्स इलेभेन पञ्जाव
६ जना नाम चलेका खेलाडीले भरिएको छ, किङ्ग्स इलेभेन पञ्जाबको टिम । ती हुन्— सन मार्स, मार्टिन गुपटिल, हसिम अमला, इयोन मोर्गन, डेविड मिल्नर र ग्लेन म्याक्सवेल । म्याक्सवेल कप्तान पनि हुन् र यसपल्टको प्रतियोगितामा अस्ट्ेरलियाली खेलाडीको नेतृत्वमा रहेको यो अर्को टिम हो । टिममा अर्का विदेशी अलराउन्ड डरेन सामी पनि छन् । उनकै नेतृत्वमा वेस्ट इन्डिजले पछिल्लो वल्र्ड ट्वान्टी–२० जितेको थियो । किङ्ग्स इलेभेन पञ्जावमा नाम चलेका भारतीय खेलाडीको भने कमी छ, रिद्दीमान साहलाई अपवाद मान्ने हो भने । त्यसैले टिमको प्रदर्शन पूर्णत: विदेशी खेलाडीमा निर्भर हुनेछ ।
प्रतियोगिताको उपाधिको अर्को बलियो दावेदार हो— कोलकाता नाइटराइडर्स । शाहरूख खानको यो टिमले अहिलेसम्मका सबै संस्करणमा राम्रो खेलेको छ । त्यसैले यो आईपीएलको पूर्व विजेता पनि हो । टिमका कप्तान हुन्— गौतम गम्भीर । गौतम भारतीय टिममा स्थान बनाउन संघर्षरत छन् । यद्यपि उनी कोलकाता नाइटराइडर्सका लागि भने अब्बल दर्जाको खेल प्रदर्शन गर्छन् । त्यसैले यो टिमको प्रदर्शन यिनै प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानको खेलमा भर पर्नेछ । क्रिस लायन टिमका विदेशी खेलाडी हुन् र उनले प्रतियोगितामा गम्भीरलाई बलियो साथ दिनुपर्नेछ । टिमले कति सन्तुलित खेल खेल्ने हो, त्यसैले उसको यात्रा तय गर्नेछ ।
यसपल्टको प्रतियोगितामा सबैभन्दा बलियो ब्याटिङ क्रम भएको टिम हो— मुम्बई इन्डियन्स । भारतीय टिममा पर्न छाडेका रोहित शर्मा यो टिमका कप्तान हुन् । उनलाई ट्वान्टी–२० क्रिकेटका विशेषज्ञ ब्याट्सम्यान पनि मानिन्छ । शर्मासँग टिममा रहेका प्रमुख ब्याट्सम्यान हुन्— किरोन पोलार्ड, जस बटलर, क्रुनाल पान्ड्या, लेन्डल सिमोन्स, निकोलस पुरन तथा एसेला गुनरत्ने । टिमसँग अनुभवी भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह पनि छन्, तर टिमको बलिङको जिम्मा श्रीलंकाली बलर लसिथ मलिङ्गामा निर्भर हुनेछ । मलिङ्गाको चोट टिमका लागि समस्या हुन सक्छ । टिमले नयाँ खेलाडी नकिनेको कुरा पनि उसको टाउको दुखाइ हुन सक्छ ।
राइजिङ पुने सुपरजायन्ट्स
महेन्द्रसिंह धोनीले भारतीय टिमबाट खेल्न छाडिसकेका छन्, तर धोनी राइजिङ पुने सुपरजायन्ट्सका प्रमुख खेलाडी हुनेछन् । यद्यपि धोनीले टिमको नेतृत्व भने गर्नेछैनन् । उनको स्थानमा कप्तान छन्— अस्ट्ेरलियाका स्टिभ स्मिथ । उनलाई अहिलेको पुस्ताका सबैभन्दा राम्रा ब्याट्सम्यान मानिन्छ । स्मिथकै नेतृत्वमा अस्ट्ेरलियाले भारतविरुद्धको तनावग्रस्त टेस्ट सिरिज खेलेको थियो । टिममा अजिन्के रहाने र फाफ डे फ्लेसिसजस्ता खेलाडी पनि छन् । राइजिङ पुने सुपरजायन्ट्सको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बलिङ हुनेछ, जसमा कुनै पनि नाम चलेका खेलाडी छैनन् । टिमले चोटका कारण आर आश्विनलाई गुमाइसकेको छ ।
रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर
गत सिजनको उप विजेता हो— रोयल च्यालेञ्जर्स बेंगलोर र टिममा रहेका सबैभन्दा ठूला नाम हुन्— भारतीय टिमका पनि कप्तान विराट कोहली । विराटलाई विश्व क्रिकेटमै आक्रामक खेलाडी मानिन्छ । चोटका कारण उनले पनि सुरुवाती चरणका केही खेल खेल्नेछैनन् । विराटको अनुपस्थितिमा पनि टिमको ब्याटिङ उत्तिकै बलियो छ । यसको कारण हो, टिमका दुई ठूला नाम, क्रिस गायल र एबी डे भिल्लियर्स । यी दुवै खेलाडी कुनै पनि समय खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सक्षम छन् । रोयल च्यालेञ्जर्स बेंगलोरसँग अस्ट्ेरलियन अलराउन्डर सेन वाट्सन पनि छन् ।
आईपीएल–२०१८ कुन टिम कस्ता ?
क्रिकेटमय वर्ष वैशाख ४, २०७५
वर्षका चर्चित खेल व्यक्तित्व वैशाख ३, २०७५
आईपीएलका महँगा खेलाडी चैत्र २८, २०७४
डेब्युको प्रतीक्षामा सम्भावित स्टार चैत्र २७, २०७४
विवादै विवादको आईपीएल चैत्र २६, २०७४
आईपीएल–२०१८ कुन टिम कस्ता ? चैत्र २६, २०७४
नेपाली क्रिकेट अब कता ? चैत्र १८, २०७४
विराट गोल्डकप आजदेखि चैत्र १७, २०७४
इंग्ल्यान्डका कारण चर्चित समूह चैत्र १३, २०७४
नेपालको स्तर निर्धारण भएको प्रदर्शन चैत्र ६, २०७४